နှစ်စဉ်သုတေသနသုံးသပ်ချက် - ကလေးသူငယ်များအွန်လိုင်းနှင့်မိုဘိုင်းနည်းပညာအသုံးပြုသူများကြုံတွေ့ရသောထိခိုက်မှုများ - ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်လိင်နှင့်ရန်လိုသောအန္တရာယ်များကိုသဘာဝ၊ ပျံ့နှံ့မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု (၂၀၁၄) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်တွင်
J ကိုကလေး Psychol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2014 Jun;55(6):635-54. doi: 10.1111/jcpp.12197.
Livingstone S က1, Smith က PK.
လူငယ်များအားဖြင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများ၏အသုံးပြုမှုနှင့်အင်တာနက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများရှိအလယ်တန်းကလေးဘဝအားဖြင့်ရွှဲချဉ်းကပ်, အတိတ်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းလျှင်မြန်စွာတိုးပွားလာခဲ့သည်။ များစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုအပြင်, အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာ, အဆက်အသွယ်သို့မဟုတ်အကငျြ့ထိခိုက်မှု၏အန္တရာယ်နှင့်ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်; အများဆုံးသုတေသနပြင်းထန်တဲ့သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်ဆီးဒီကနေရလဒ်ရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ဒီလိုအန္တရာယ်များ၏သဘောသဘာဝနှင့်ပျံ့နှံ့ဆန်းစစ်လျက်, ပညာရေးနှင့် Practitioner အသိပညာအခြေစိုက်စခန်းအကြောင်းကြားရန်သကဲ့သို့, တိုးမြှင့သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအန္တရာယ်များကနေရရှိလာတဲ့အန္တရာယ်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်သောအချက်များနှင့် ပတ်သက်. အထောက်အထားအကဲဖြတ်ရန်။ ကျနော်တို့သုတေသန၏ဤအတော်လေးသစ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြုံတွေ့ယင်းအယူအဆနှင့်အတိုင်းအတာများစိန်ခေါ်မှုများလည်းခွဲခြားသတ်မှတ်, နှင့်နှိပ်သုတေသနကွာဟချက်ကိုမီးမောင်းထိုးပြ။
ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများကိုများအတွက်စျေးကွက်အတွက်အပြောင်းအလဲ၏အရှိန်အဟုန်ပေးထားကျနော်တို့ 2008 ကတည်းကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသုတေသနပြန်လည်သုံးသပ်။ သော့ချက်စည်းကမ်းများကို (စိတ်ပညာ, လူမှုဗေဒ, ပညာရေး, မီဒီယာလေ့လာမှုများနှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ) မှစာပေ၏စေ့စေ့စပ်စပ် bibliographic ရှာဖွေရေးအပြီးတွင်အဆိုပါသုံးသပ်ချက်ကိုကိုလယ်ခြုံငုံသုံးသပ်အတွင်းကဤသုံးသပ်မကြာသေးမီ, အရည်အသွေးမြင့်ပင်ကိုယ်မူလလေ့လာမှုများအပေါ် concentrates ။
ဆိုက်ဘာအနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ သူစိမ်းများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း၊ လိင်စာပို့ခြင်း ('sexting') နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ဆယ်ကျော်သက် ၅ ယောက်လျှင် ၁ ယောက်ထက်နည်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ပျံ့နှံ့နှုန်းခန့်မှန်းချက်များသည်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်တိုင်းတာမှုအရကွဲပြားသော်လည်းမိုဘိုင်းနှင့်အွန်လိုင်းနည်းပညာများလက်လှမ်းမီမှုတိုးတက်လာခြင်းနှင့်အတူသိသိသာသာမြင့်တက်လာပုံမရပေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းနည်းပညာများသည်အော့ဖ်လိုင်းအပြုအမူအတွက်နောက်ထပ်အန္တရာယ်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အသိအမြင်နှင့်အစပျိုး။ အွန်လိုင်းအန္တရာယ်များအားလုံးသည်မိမိကိုယ်မိမိအစီရင်ခံခြင်းအားဖြင့်ထိခိုက်စေနိုင်သော်လည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုဆက်ဆံရေးဆိုးကျိုးများကို longitudinal လေ့လာမှုများကဖော်ပြသည်။ မည်သည့်ကလေးများသည်အခြားသူများထက် ပို၍ အားနည်းချက်ရှိကြောင်းဖော်ထုတ်ရန်အတွက်အသုံးဝင်သည်။ သက်သေအထောက်အထားများတွင်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအချက်များ (အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုနိမ့်ခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများ)၊ လူမှုရေးအချက်များ (မိဘအထောက်အပံ့မရှိခြင်း၊ , ဒီဂျစ်တယ်ကျွမ်းကျင်မှု, တိကျသောအွန်လိုင်းဆိုဒ်များ) ။
မိုဘိုင်းနှင့်အွန်လိုင်းအန္တရာယ်များသည်ကလေးများ၏ဘဝတွင်ရှိပြီးသား (အော့ဖ်လိုင်း) အန္တရာယ်များနှင့်ပိုမိုဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ သုတေသနကွာဟချက်များအပြင်ယောဂီများအတွက်သက်ရောက်မှုများကိုလည်းဖော်ထုတ်ထားသည်။ ယခုစိန်ခေါ်မှုမှာမတူညီသောစွန့်စားမှုများအကြားတွင်ရှိသည့်ဆက်နွယ်မှုများကိုဆန်းစစ်ရန်နှင့်ထိရောက်သောကြား ၀ င် ၀ င်ရောက်မှုများကိုဖော်ထုတ်ရန်အတွက်ဖော်ထုတ်ထားသောအန္တရာယ်နှင့်အကာအကွယ်အချက်များပေါ်တွင်တည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။
KEYWORDS: ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတို့သည်; ကလေးကအန္တရာယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ဆိုက်ဘာကျူးကျော်; အင်တာနက်; အွန်လိုင်းနှင့်မိုဘိုင်းနည်းပညာများ, အန္တရာယ်အချက်များ; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ messaging နှင့်ညစ်ညမ်း